Ahama-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha birta ahama | Shiinaha ahama Steel Butros Comb Factory
Xayawaanka Groomer dhammeeya shanlo
Shanlada isqarxinta xayawaankani waa Duty culus, waa miisaan aad u fudud, laakiin xoog leh.Waxay leedahay aluminium gadaal gadaashiisa ah iyo Anti daahan ma guurto ah si ay u yarayn karto ma guurto ah.
Shanlada dhamayska leh ee xayawaanka leh ilkaha birta ah ee isku dhafan oo siman, waxay si fudud ugu dhex dahaadhaa jubbadaha ugu dhumuc weyn.
Shanlada dhammeeya ee xayawaanada xayawaanku waxay leeyihiin ilko cidhiidhi ah oo ballaadhan.Waxaan u isticmaali karnaa dhamaadka ballaadhan ee ballaarinta meelaha waaweyn, iyo dhamaadka cidhiidhiga ah ee meelaha yaryar.
Waa shanlo xayawaan rabaayad ah oo loogu talagalay boorsada muraayad kasta.
Qalabka Birta lagu dhammeeyo ee Birta ah
Shanlada dhammeystiran ee xayawaanka birta ah waa shanlo muhiim ah oo xayawaankaaga ku hayn kara nadaafad iyo caafimaad iyadoo laga fogeynayo dhaldhalaalka, dermaha, timaha dabacsan, iyo wasakhda.
Shanlada dhamaysta xayawaanka birtu waa qafiif, ku habboon tahay, oo si fudud loo qaadi karo.
xayawaanka birta ah ee dhamaysta ilkaha shanladu waxay leeyihiin kala dheelitirnaan kala duwan, Laba nooc oo kala dheerta ah ah oo ilka ah ah, Laba siyaabood oo loo adeegsado, ka haboon oo wax ku ool ah.Waxay ku siin kartaa is qurxin kaamil ah.
Ahama steel eyga shanlo
Shanladaas waxaa laga soo saaray walxaha birta ah, oo ah daxal iyo daxalka u adkaysta, adag, adkeysi leh oo aan sahlanayn in la jabiyo.
Shanleyda eyda birta ah ee birta ah waxaa loogu talagalay dusha sare ee siman oo cimri dherer ah, shanlada eyda wareegsan ma xoqayso maqaarka xayawaanka waxayna ku siin doontaa waayo-aragnimo qurxin raaxo leh iyada oo aan la dhaawicin xayawaankaaga, waxay sidoo kale si wax ku ool ah uga hortagi kartaa korantada ma guurtada ah.
Shanlada eyda birta ah ee birta ka sameysan waxay ka caawineysaa inay ka saarto eyda iyo bisadaha bisadaha, dermaha, timaha dabacsan iyo wasakhda, waxay sidoo kale kicisaa maqaarka waxayna hagaajisaa wareegga dhiigga, wax weyn ayey u tahay dhammaystirka iyo khafiifinta timaha xayawaankaaga.
Ahama Steel shanlada
Shanladaas loogu talagalay xayawaanku waxay ka samaysan yihiin bir bir ah oo waarta.
Shanlada birta ah ee birta ah ee loogu talagalay xayawaanku waxay si fiican gacanta ugu habboon yihiin oo way ka sii deggan tahay wax ka dheer shanlooyinka dhaqameed.
Shanlada noocan ah ee loo yaqaan 'steel steel steel' ee loogu talagalay xayawaanku waxay leeyihiin ilko ballaadhan.Waxay ku habboon tahay furfurka gogosha ama siinta muuqaal dhammaystiran oo jaakadda ah.Waxay sidoo kale ku habboon tahay meelahaas xasaasiga ah sida wejiga iyo cagaha.
Shanlada biraha ah ee birta ah ee xayawaanka loo yaqaan 'Pet steel' waxay ku habboon tahay dhammaystirka iyo qalalaasaha, iyadoo la siinayo qofka aad jeceshahay muuqaalka xirfadda leh.
Birta Eeyaha Birta shanlo
1. Wareeg ilkaha shanlada birta ah ee birta ah ee jilicsan ayaa si fiican u ilaalin kara maqaarka eeyaha iyada oo aan wax dhibaato ah soo gaarin, waxay ka saartaa dhaldhalaalka / darmooyinka / timaha dabacsan iyo wasakhda, oo ku badbaada maqaarka xayawaankaaga xasaasiga ah.
Shanleyda biraha eey birta ka samaysan waxay ka samaysan tahay qalab bir bir ah oo tayo sare leh, adkaansho sare, miridhku iyo cillad aan lahayn.
Shanlada birta eey birta ah waxay leedahay ilko yaryar iyo ilko cufan. Ilkaha yaryar waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo eeyaha iyo bisadaha, guntimaha timaha ee isku dhafan ayaa si fudud loo qurxin karaa qaybta cufan.
Birta Ey Qurxinta Dharka
Shanlada qurxinta eeyga ee birta ah ayaa ku habboon in lagu faahfaahiyo meelaha dhogorta jilicsan ee wejiga iyo lugaha ka jira, iyo shanlaynta dhogorta guntin ee agagaarka meelaha jidhka.
Shanlada eyda birta ah ee xiraysaa waa shanlo muhiim ah oo xayawaankaaga xayawaan ah ku ilaalin kara nadiif ahaanta iyo caafimaadka iyadoo laga qaadayo dhagxaanta, darmooyinka, timaha dabacsan, iyo wasakhda, waxay uga tagaysaa timahiisa ama timahoodu kuwo aad u fiican oo qalafsan.
3.Waa shanlo Fudud oo loogu talagalay qurxinta daal la'aanta. Kani waa gebi ahaanba waa inuu lahaadaa shanlo eyda birta lagu qurxiyo si looga caawiyo in eyga loo ilaaliyo jaakadaha. Shanlo ilkaha oo siman oo wareegsan oo loogu talagalay qurxinta dhammaystiran. Ilkaha dhamaadka wareega si tartiib ah u duug oo u kici maqaarka xayawaankaaga si aad uhesho jaakad caafimaad qabta oo muuqata.